My Thoughts My Blog: December 2009
The Review of 2009
2009 ခုနှစ်ဟာလည်း သူလို ကိုယ်လို ကုန်ဆုံးပြီး နှစ်သစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 2010 ကိုချဉ်းနင်းဝင်ရောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ လူသားအားလုံးဟာလဲ နှစ်တစ်ခု ပြီး တစ်ခုပြောင်းတာကို တစ်ခုတ်တစ်ရ တော့ ကြိုဆိုတက်ခဲ့ကြသည်။ 2009 ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ကတော့ ပြောင်းလဲမှု တစ်ချို့ နဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ချို့ကို ရင်ဆိုင် ကြုံတွေခဲ့ရပါသည်။ 2009 ခုနှစ်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့ ထိရောက်မှုတွေ အစပျိုးပေးခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ 2009 နှစ်မှာ 2008 ခုနှစ် နာဂစ် ကိစ္စ လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ မတူတဲ့ တခြားသော ကိစ္စ လုပ်ဆောင်မှုအတော်များများလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ အများနဲ့ ဆက်ဆံရမှုအပိုင်းမှာလဲ အပြောင်းအလဲ သဖွယ် ဆက်ဆံခဲ့ရမှုများရှိခဲ့သည်။
2009 ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော့် အတွက်သာမကပဲ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အားလုံးသော အများသူငါ ပတ်ဝန်းကျင်များပါ ထူးခြားသော အဖြစ်အပျက်များစွာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထူးခြားသော အဖြစ်အပျက်ဆိုသည်မှာ အရင်က မဖြစ်ခဲ့ဘူးသော အခြေအနေ အကြောင်းအရာမျိုးစုံ ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ကျွန်တော့်အတွက်၊ ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသောလူများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ဘလော့ဂ်ရေးသူများ၊ နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေးသမားများ စသဖြင့် သူတို့လည်း ထူးခြားသော အရာများနဲ့ ကြုံဆုံခဲ့ရပေလိမ့်မည်။
2009 ခုနှစ်တွင် ဘလော့ဂါတစ်ဦးအနေဖြင့် ဘလော့ဂ် များစွာ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဖတ်များဆုံး ဘလော့ဂ်များမှာ မိမိဘလော့ဂ်၏ ဘလော့ဂ်လစ်ထဲတွင် ရှိသော ဘလော့ဂ်များ၊ ရီဒါဖြင့် ဖတ်သော ဘလော့ဂ်များ၊ သတင်းဘလော့ဂ်များ၊ လင့်က် ရှယ်ယာဖြင့် သိသော ၀က်ဆိုဒ် ဘလော့ဂ်များ အစရှိသဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်များမှာ များသောအားဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရေးသားချင်းဖြစ်သည်။ သို့ပေမဲ့ အချို့သော အကြောင်းအရာများမှ သက်ဆိုင်ရာ ဖတ်သူအတွက် လိုအပ်သော အသိသုတ ကိုရစေသည်။
2009 နှစ်ကုန်ပိုင်း လများမှာတော့ ဘလော့ဂ်ရေးသူ လူငယ်လူရွယ်များနှင့် မြန်မာအိုင်တီလောက မှ လူများအနေ ဖြင့် အင်တာနက်နှင့် သက်ဆိုင်သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆီမင်နာများ၊ ၀က်ဘ်ရှော့များ၊ သုတနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သော ပွဲများ၊ စုဝေးတွေ့ဆုံမှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။ ထိုပြင် လူငယ်များအနေဖြင့် တက်နိုင်သလောက် စုစည်း၍ ပရိဟိတလုပ်ငန်းများအတွက် စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ရှိလာခဲ့သည်။ 2009 ခုနှစ်တွင် လူငယ်များအနေဖြင့် နည်းပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များအပြင် လူမှုရေး ပရဟိတ များဘက်ပါ ပိုမို အလေးထားစိတ်ဝင်စားကာ ဆောင်ရွက်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
2009 ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အသင်းအပင်းကိစ္စများအပြင် လူမှုရေး ပရဟိတ လုပ်ငန်းများကို တစိုက်မက်မက်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော် နောက်ပိုင်းရေးသော ဘလော့ဂ်ပိုစ့်များတွင် လူမှုရေးလုပ်ဆောင်ချက်ပို့စ်များ ကို တွေ့နိုင်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြင့် မလုပ်နိုင်သော ဤမွန်မြတ်သော ပရဟိတလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို အများသူငှာစုပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် နှင့် သိစေခြင်းအကျိုးငှာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရုံသာမက လုပ်ခဲ့သမျှကိုလည်း သေချာရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
2009 ခုနှစ်မှာထက် စာရင် လာမဲ့ 2010 ခုနှစ်မှာ ဘလော့ဂ်တော်တော်များ၏ ဘလော့ပိုစ့်များသည် ပိုစ့်တစ်ခု တွင် အရှည်ကြီးများ ဖြစ်မနေပဲ တိုတိုနဲ့ ရှင်းရှင်းသာ ရေးသားလာမည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။ ဘလော့ဂ်ရေးသူ တော်တော်များသည်လဲ ဘလော့ဂ်ဂင်း ပလက်ဖောင်းတစ်ခု သာမကပဲ Facebook ကဲ့သို့သော လူမှုဆက်သွယ်ရေး ၀က်ဆိုဒ်များ ပိုမိုအသုံးပြုလာမည်ဖြစ်သည်။ Twitter လိုမျိုး မိုက်ခရိုဘလော့ဂ်ဂင်း များလည်း ဒီထက်မက သုံးစွဲလာနိုင်သော အလားအလာရှိပါသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများနဲ့ သတင်းနဲ့နည်းပညာ အချက်အလက်များ သုံးစွဲမှုများလည်း 2010 တွင် ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်သော လူမှုဆက်သွယ်ရေးများ ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာနိုင်ပြီး ထိရောက်သော သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာပြန့်ပွားစေရေး အသုံးချမှုများနှင့် လူမှုပရဟိတ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းများဟု ယူဆရပါသည်။
၂၃ နာရီ ၅၀ မိနစ်
ရေးသားသူ phoe thu taw at 11:51 PM
မနက် ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ်ခန့်။
ဖုန်းလာသည်ဟုလာပြောသောကြောင့် အိပ်ယာထဲမှ လူးလဲထကာသွားကိုင်ရပါသည်။ သူငယ်ချင်းမလေးတစ်ဦး ဆက်တာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ သုခရိပ်မြုံဂေဟာသွားဖို့ လှမ်းချိန်းခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ကိုပါ အကြောင်းကြားခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အင်း အင်း ပြောလိုက်မယ်ပြောပြီး အိပ်ယာထဲ ပြန်ခွေလိုက်တာ မနက် ၁၀ နာရီ ခွဲကျော်မှ နိုးသည်။း) ထို့နောက် ပြင်ဆင်စရာရှိတာများ ပြင်ဆင်ပြီး သောအခါ ၁၁ နာရီ ထိုးနေပြီဖြစ်သည်။ မည်သူ့မျှ မချိန်းရသေး။ အရေးထဲ ဗိုက်ထဲကလည်း ညက စားထားသော အချဉ်များနှင့် ထမင်းကြော်များက ဆန္ဒပြသဖြင့် သည်ကိစ္စလည်း ရှင်းလိုက်ရသေးသည်။ ခဏနေတော့ ဖုန်းတစ်ခါလာသည်။ ချိန်းရမည့်သူငယ်ချင်းက သေချာမသိ၍ လှမ်းဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အတော်ပဲဖြစ်သွား၍ သူ့အား ဆုံမည့်အချိန်နှင့်နေရာအား ပြောလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် ဆက်လက်ပြီး ချိန်းဆိုရမည့်လူများကို ဆက်ချိန်းပါသည်။ အားလုံးပြီးစီး၍ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၁၂ အတိထိုးနေပြီ။ ကိုယ်ကချိန်းထားတာ ၁၂ ခွဲ။ လေယာဉ်ပျံလို မြန်သော ကားဖြင့် ချိန်းထားသော နေရာကို ရောက်အောင်သွားရပါသည်။
တကယ်တော့ ဒီနေ့သွားမည့်ကိစ္စကို စီစဉ်ထားသည်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်ခန့်ကတည်းကဖြစ်သည်။ စေတနာရှင်တစ်ဦးမှ လှူဒါန်းသောငွေ နှင့် ကျွန်တော့်တို့ လှူဒါန်းသော ငွေ၊ ကလေးဆော့စရာ ပစ္စည်းများ အားလုံးစီစဉ်ထားသည်။ ထိုပစ္စည်းများအား ယူဆောင်ပြီးထွက်ခဲ့ရာ ချိန်းဆိုထားသောနေရာကို ၁၂ ခွဲပြီး ၅ မိနစ်တွင်ရောက်ပါသည်။ ကျန်သောသူများ မရောက်သေးသောကြောင့် အေးအေးပင် ကော်ဖီတစ်ခွက်ထပ်သောက်ပြီး စောင့်နေပါသည်။ ဗိုက်က ဆာနေသော်လည်း အစားတစ်ခုခု စားလိုက်၍ လမ်းမှာ ဒုက္ခရောက်မည်ဆိုသောကြောင့် သည်းခံနေရသည်။ ချိန်းသောသူများလည်း ရောက်လို့လာပြီ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်လည်း မခံနိုင်သည့် အဆုံး နေ့လည်စာကို ကောက်ညှင်းပေါင်းလေး တစ်ပွဲ စားလိုက်ပြီး တင်းတိမ်လိုက်သည်။
ထိုနောက် သုခရိပ်မြုံဂေဟာသို့ ထွက်လာခဲ့ရာ နေ့လည် ၂ နာရီကျော်လောက်တွင်ရောက်ပါသည်။ ဂေဟာရောက်ရောက်ခြင်း သူနာပြုဆရာမကြီးနှင့်တွေ့ဆုံ၍ ကျွန်တော်တို့ ရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားပါသည်။ ယမန်နေ့က ဖုန်းကြိုဆက်ထားသောကြောင့် ဆရာမ ဒေါက်တာ ထားထား (စုထား) ကျွန်တော့်တို့ကို စောင့်နေပါသည်။ သို့သော် ၁ နာရီကျော်လောက်ရောက်မည်ပြောထားပြီး ၂ နာရီကျော်မှာ ရောက်လာသဖြင့် ဆရာမ စုထား ပြန်သွားပါသည်။ ဆရာမ စုထားအား လွန်စွာပင် အားနာမိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ထင်မှတ်မထားတဲ့ ကြန့်ကြာမှုလေးများ ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ဆရာမကြီးနှင့် စကားစမြည်အနည်းငယ်ပြော၍ အလှူငွေများ ပေးအပ်ပြီး ကလေးများ တီဗီကြည့်နေရာ နေရာလို့ သွား၍ ဆော့စရာပစ္စည်းများ သကြားလုံးနှင့် ပီကေများ သွားရောက်ပေးအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်တို့ အသင့်ယူလာသော ဆော့စရာပစ္စည်းများနှင့် ကလေးများ နှင့်အတူတူ ဆော့ကစားကြပါသည်။ ကလေးများသည် လွန်စွာပျော်ရွှင်၍ စိတ်ပါလက်ပါ ဆော့နိုင်ပါသည်။ အဖွဲ သုံးဖွဲ့ ခွဲ၍ ဆော့စေရာ နိုင်သော အဖွဲ့အား ဆုပေးသည့် စနစ်ကျင့်သုံးပါသည်။ ကံအားလျော်စွာ ကျွန်တော် တာဝန်ယူသောအဖွဲ့ နောက်ဆုံးရသွားပါသည်။
ထိုသို့ပစ္စည်းများနှင့် ဆော့ကစားခြင်း ပြီးဆုံး၍ ကလေးများနှင့် ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းထိုင်ပြီး ပါဆယ်ဂိမ်းဆော့ကြပါသည်။ ထိုကစားနည်းမှာ သူတို့အားလွန်စွာ ပျော်ရွှင်စေပါသည်။ ပါဆယ်ဂိမ်း ထုံးစံအတိုင်း သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖွင့်ပြီး သီချင်းရပ်သောအခါ ပါဆယ်ကြသည့်သူသည်အားလုံး ခိုင်းရာ လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆော့သည်အခါ ပါဆယ်ကြသွားသော ကလေးများသည် သူတို့ချင်းချင်း လုပ်ခိုင်းသော ဟာမျိုးကို သေချာ မရှက်ပဲ လုပ်နိုင်ပါသည်။ မျောက်က ကခြင်း၊ ပဲပြုတ်ရောင်းခိုင်းခြင်း အစရှိသဖြင့် ဖြစ်သည်။ အသက် ၁၃ နှစ်ခန့် အရွယ် ကလေးမလေးတစ်ဦးဆိုလျှင် အများက သီချင်းဆိုခိုင်းသောကြောင့် သီချင်းဆိုရာ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း၏ အပြစ်မမြင်ပါဘူး ချစ်ချင်တာပဲ သိတယ် ဆိုသည့် သီချင်းအား သေချာပိုင်နိုင်စွာ တစ်ပုဒ်လုံး သီဆိုသွားသည်ကို အံ့ဩဖွယ် တွေ့ရပါသည်။ ပါဆယ်ကြသူများအား ခိုင်းတာလုပ်ပြီးသွားသောအခါ သကြားလုံးနှင့် ပီကေများ ပေးပါသည်။
ထိုသို့ ဆော့ကစားပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့လည်း ပြန်ချိန်ကျရောက်လာသောကြောင့် ပြန်ဖို့ ပြင်ရပါသည်။ ကလေးများ ဖွထားသော သကြားလုံးခွံများ၊ ပလက်စတစ်အိပ်များ၊ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းရပါသည်။ အချို့ကလေးများသည် ခင်မင်၍ ကိုယ့်အား ဖက်တွယ်ထားကြသည်။ မနည်းကို ချော့မော့၍ ထားခဲ့ရပါသည်။ နောက်အခါများ လာခဲ့ပါမယ်ဟု ပြောခဲ့ရပါသည်။ သူတို့က နောက်တစ်ခါလာရင် ပီကေ ၀ယ်ခဲ့ဟု အထပ်ထပ်မှာပါသည်။နောက်တစ်ခေါက်ဆိုလျှင် ပီကေ ( ချောကလက်သကြားလုံး) များများ ၀ယ်သွားမည်ဟု စိတ်ကူးမိပါသည်။
ညနေ လေးနာရီကျော်တွင် ဂေဟာမှပြန်ရာ ငါးနာရီကျော်ခန့်တွင် နေရပ်သို့ အေးဆေးစွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါသည်။ ဤသို့ ရောဂါဝေဒနာ ရှိနေသော ကလေးသူငယ်များအား စိတ်ဓါတ်ရေးရာ အနည်းငယ်တက်လာစေရန် သူတို့နှင့် ရင်းနှီးစွာ ထိတွေ့၍ ဆော့ကစား (၀ါ) စကားပုံပြင်အစရှိသည်တို့ ပြောဆိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သက်သာစေနိုင်သည်ဟု ပြောလို့ရပါသည်။ သူတို့သည်လည်း လာသောသူများအား များစွာ ခင်တွင်ပုံရပါသည်။ ဂေဟာတွင် HIV ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံ ကလေးငယ်ပေါင်း အသက် ၁ နှစ်မှ ၁၅ ထိ စုစုပေါင်း ၄၅ ယောက်ရှိပါသည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဒီမှာ သွား၍ ဖတ်နိုင်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မိမိတို့ တက်နိုင်သောအင်အားဖြင့် မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိသော ချို့တဲ့ ကလေးငယ်များ၊ HIV ကူးစက်ခံကလေးငယ်များအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် စေတနာသဒ္ဒါတရား ထားနိုင်ကြပါစေဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။
အောက်တွင် ဓါတ်ပုံအနည်းငယ်အား ဖော်ပြထားပါမည်။ ကူးယူသုံးစွဲလိုပါက ကြိုတင်အကြောင်းပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ကလေးများအား သကြားလုံးနှင့် ပီကေများ ပေးနေစဉ် (နောက်က မတ်တက်ရပ်နေတဲ့ ကလေးမ ၂ ယောက်လည်း စားချင်လို့ထင်ပါတယ်။ လှမ်းကြည့်နေတယ် :P )
ကလေးများအတွက် ဆော့စရာနှင့် စတစ်ကာ ပုံလေးများ
ပစ္စည်းများ ပေးရန် ပြင်ဆင်နေပုံ
ကလေးများ ပြောနေသည်ကို နားထောင်နေစဉ်
၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်
ရေးသားသူ phoe thu taw at 1:40 AM
Barcamp Yangon သတင်းမီဒီယာ ရှင်းလင်းပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ပြီးစီး
Barcamp Yangon !!
Barcamp Yangon နဲ့ပတ်သတ်လို့ စာနယ်ဇင်းများသို့ ရှင်းလင်းပွဲကို ဒီနေ့ ( 10-Dec-2009) ကြာသပတေးနေ့ မနက် ၁၀ နာရီမှာ တာမွေအ၀ိုင်းထိပ်မှာရှိတဲ့ Moon bakery မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲကို7Days၊ Internet ၊ Myanamr Post၊ ပြည်မြန်မာ၊ အလင်းတန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းမ်၊ မြန်မာတိုင်းမ်၊ Time to Time ၊ Knowledge bridge ၊ Flower News ၊ PC Magazine စတဲ့ သတင်းမီဒီယာများမှ လာရောက်သတင်းယူ မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရှင်းလင်းပွဲမှာ ကိုဇော်ဇော်မျိုးလွင်က အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး Public Relation Team မှ မထိုက်ထိုက်အောင်က Barcamp များဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ Barcamp များရဲ့ သဘောသဘာဝများကို Website များကို ကိုးကားပြီး ရှင်းလင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ ကိုဇေသီဟမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ Barcamp များကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် Barcamp လာရောက်သူ ပရိတ်သက်များနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များ စသည်ဖြင့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ လုပ်ငန်းရှင်၊ ပညာရှင်၊ ၀ါသနာရှင်လူငယ်များအားလုံးကို ဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင် သလဲဆိုတာ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကိုသက်ထူး@မျက်လုံး ကတော့ Barcamp Yangon မှာကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ အစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ဖြည့်စွတ်ချက် အချို့ကို ကိုကျော်ဇေယျမှ ဖြည့်စွတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး စာနယ်ဇင်းများမှ သိလိုတဲ့ အချက်များကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သားအားလုံးမှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ Facebook နှင့် Twitter (www.Twitter.com/barcampyangon) များမှလည်း Live update များ တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Barcamp ကို Barcamp Bangkok, Barcamp KL စသည်ဖြင့် ကျင်းပတဲ့ မြို့အမည်နဲ့ တွဲပြီး မှတ်တမ်းတင်လေ့ရှိပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံများအနေနဲ့ ပြောရရင် Singapore, Malaysia, Kazakhtan, Thiland, India , Vientam နိုင်ငံတို့မှာရှိတဲ့ မြို့အသီးသီးမှာ Barcamp တစ်ကြိမ်ထက်မနည်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ India ဆိုရင် သူ့ရဲ့ မြို့ အသီးသီးမှာ Barcamp ၂၇ ကြိမ်လောက် ပြုလုပ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အခြားသော Africa နိုင်ငံများ၊ Arab နိုင်ငံများ၊ Ameraica နိုင်ငံများ၊ Europe နိုင်ငံများမှာရှိတဲ့ မြို့အသီးသီးမှာလည်း Barcamp များ အကြိမ်းများစွာ ပြုလုပ်ကျင်းပ နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီး ကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ မြို့တွေလည်း အများအပြား ရှိပါတယ်။
Barcamp Yangon ပွဲကို ၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီလ ၂၃၊ ၂၄ ရက်နေ့များတွင် Myanmar Info-Tech တွင် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး ၎င်းပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် MCPA မှဦးဆောင်ပြီး Frellance လူငယ်အိုင်တီသမားများနှင့် ပူးပေါင်း ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်မံ၍ ပူပေါင်းပါဝင်လိုတဲ့ အိုင်တီသမားများ ၊ Volunteer များကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ BarcampYangon ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပမဲ့ Barcamp တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Barcamp Yangon မှာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်၊ ပညာရှင်၊ ၀ါသနာရှင်များကို စုစည်းပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ နည်းပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ အကြံဉာဏ်တွေကို ဖော်ထုတ်စုစည်းနိုင်ဖို့၊ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ကြဖို့ အတွက် Open Environment တစ်ခု ဖန်တီးပေးဖို့ ရည်ရွယ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Barcamp Yangon မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသိဉာဏ်ဗဟုသုတတွေကို လွတ်လပ်ပွင်းလင်းစွာ ဖလှယ်ကြဖို့၊ ပြန်ကျဲနေတဲ့ Idea တွေကို ၀ါသနာတူ ၊ စိတ်တူ၊ ကိုယ်တူသူများနဲ့ စုစည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြဖို့ အဓီက ရည်ရွယ်ကျင်းပသွားမှာပါ။ Barcamp Yangon မှာ ဘယ်နယ်ပယ်၊ ဘယ်ဘာသာရပ်တွေကို အဓိက ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတာ တက်ရောက်တဲ့ ပရိတ်သက်များက ဆုံးဖြတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့က ပရိတ်သတ်ကို အချိန်၊ နေရာ ၊ စသည်ဖြင့် organize လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်မျိုးစုံမှာ အားလုံးရဲ့ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု၊ သရုပ်ပြမှု ၊ အပြန်အလှန်ထိတွေ့မှုကနေ အကျိုးရလာဒ်ကောင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ယူဆပါတယ်။
Barcamp Yangon အတွက် Logo ပြိုင်ပွဲလေး တစ်ခုကိုလည်း ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဒီဇိုင်းဆုအတွက် ငွေးသားထက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်တစ်ခု ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် Logo ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး Web Development Team မှ ကိုထူးတေဇာ tayzar44@gmail.com ထံကို ပေးပို့သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေမြို့တွေမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Barcamp တွေရဲ့ Logo တွေကို http://Barcamp.org.LogoGallery မှာ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လူဦးရေ အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ စီစဉ်စရာများရှိတဲ့အတွက် ပါဝင်လိုသူများ၊ တက်ရောက်လိုသူများ အနေနဲ့ www.barcampyangon.org မှာ ကြိုတင် Register ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Lucky Draw အစီအစဉ်များ၊ Gift Pack များ ပေးသွားမဲ့ အစီအစဉ်များကိုလည်း အလျဉ်းသင့်သလို ထည့်သွင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာ၊ အတွေ့အကြုံ၊ အကြံဉာဏ်များကို ဖလှယ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားသူအားလုံး Barcamp Yangon မှာ ဆုံကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဖိုးသူတော် ( ၁၀.၁၂.၂၀၀၉)
Related Post: ကိုကျော်ဇေယျ ၊ မင်းယွန်းသစ်
ရေးသားသူ phoe thu taw at 11:46 PM
မင်းဟာ မင်းကို ခေါ်ဖို့ မပီသလို့ပဲ
အရင်က မင်းက နှင်းမှုံဝေေ၀နဲ့
၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်
ရေးသားသူ phoe thu taw at 3:40 AM
ဖိုးသူတော် မရှင်းချင်ပဲ ရှင်းရသည်..
ဒီနေ့ မနက် ရုံးရောက်ကတည်းက တစ်နေ့ကုန် ရုံးမှာပဲ နေနေတာ။ ဘယ်မှ လည်းသွားဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူး။ ညနေကျတော့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ခေါ်တာနဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာ တစ်ခုမှာလိုအပ်တာလေးတွေ ဈေးဝယ်ပြီး ပြန်လာတယ်။ ခဏနေတော့ အွန်လိုင်းပေါ်တက်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အမျိုးသမီး မီးဖွားခါနီးမို့လို့ ဆေးရုံသွားရမယ်ဆိုပြီး သွားလိုက်တယ်။ ကလေးမက တော့ ဖွားခန်းထဲမှာ။ ကျွန်တော်တို့က အပြင်တစ်နေရာမှာပေါ့လေ။
အဲ့ဒါနဲ့ အင်တာနက် ၀င်သုံးတော့ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကွန့်မန့်တစ်ခုရောက်နေတာနဲ့ ဖတ်ကြည့်လိုက်။ ကွန့်မန့်က အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
SmithEver has leftanew comment on your post "ပင်လယ်အပြုံး":
Dude, juz want to let ya know abt this post - http://chenaddy.blogspot.com/2009/12/blog-post_03.html.
I believe someone took ya nick intentionally.
'Coz u won't be such person who like to criticize with rude words।
သူပေးထားတဲ့ လင့်က်မှာ ပါတဲ့ ဟာကို သွားဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ အဲ့ဒီဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်ဟာ အန်တီချမ်းဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ရေးထားသော သူ၏ ပါဆင်နယ် ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော် အန်တီချမ်းဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို မသိဘူးတဲ့အပြင် မကြားဘူးပါ။ ဘယ်မှာသိဘူးသလဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ လ အနည်းငယ်က ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း(ညီမလေး) နန်းညီ က ကိုဖိုးသူတော် နဲ့ အန်တီချမ်း ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲ ဘာလဲဆိုပြီး မေးကာမှ ကျွန်တော်က ဘာလဲ ညီညီ ဘာဖြစ်တာတုန်း ဘယ်သူလဲ အန်တီချမ်းဆိုတာ ဆိုပြီး မေးယူရပါတယ်။ သူက အဲ့ဒီတော့ ဒီမှာ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ကြည့်ဆိုပြီး လင့်က် တစ်ခု ပေးတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ သွားကြည့်လိုက်တော့ အန်တီချမ်းဆိုသူနဲ့ ဖိုးသူတော် ဆိုပြီး အမည်ခံထားသူ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ရေးထားတာတွေ တွေ့တယ်။ ခေါင်းစဉ်က ဖိုးသူတော်နှင့် ဘာဆိုလား ဗျာ မေ့သွားပြီ။ သိချင်သူများ ရှာဖွေဖတ်ကြည့်။ အဲ့မှာ ရေးထားသော ဖိုးသူတော် အမည်ခံလူက ကျွန်တော် ဖိုးသူတော် နာမည်နဲ့ အင်တာနက် အွန်လိုင်း စာမျက်နှာမှာ ဘလော့ဂ်ရေးမှန်း တခြား လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်မှန်း သိပုံ မရလောက်ပါဘူး။
သိသိ နဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့် အနေအထား ကိုယ် နားလည်တော့ဗျာ။ ဒီလို နာမည်တူ ကိစ္စများက ပြင်ပ ပရင့်တက် စာပေ မီဒီယာ အသိုင်းအ၀ိုင်းများမှာပါ သူတို့ချင်းချင်း လိုက်ရှင်းနေရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်က ကဲ... အွန်လိုင်းဆိုတော့ သေချာ သုံးဖူးရင်သိကောင်းမှာပဲ ဆိုပြီး ဘာမှ မလုပ်ပဲ ထားပါတယ်။ ခုလိုမျိုး ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်ဖတ် ပရိတ်သက်က ယုန်ထင်ကြောင်ထင် ဖြစ်ပြီး အထင်လွဲမှုမျိုးကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါ။
အန်တီချမ်းဆိုသူ၏ ဘလော့မှာ ရေးသားနေသော ဖိုးသူတော်။
နောက်ကျွန်တော် Googling လုပ်ပြီး ရှာဖွေတွေ့သော နေပြည်တော်နေ အသက် ငယ်ငယ်လေး ရှိသော ဖိုးသူတော်။
ကျန်သော ကျွန်တော် မသိသေးသော ဖိုးသူတော်များ...
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြိုက်သလို နာမည်ပေးခွင့် ရှိသည်ဆိုသော်လည်း သူများ ပေးပြီးသားနာမည်ဖြစ်ပါက မတူအောင် ကိုယ့်အတွက် ထူးခြားသော ၀ိသေသ တစ်ခု ထည့်ပါ။ အကယ်၍ ငါက ဒီနာမည်ပေးတာကြာပြီ။ မင်းက ဘယ်တုန်းက ပေးထားလို့ ဒါမျိုးလည်း ဆိုတာတော့ ရှင်းချင်သပ ဆိုသေချာ အတိအလင်း ရှင်းပါ။ ကျွန်တော်ရှင်းပါမည်။ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းတွင်ဖိုးသူတော် နာမည်နဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးခြင်း အခြားသော အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှု (activities) များလုပ်ဆောင်နေသည်မှာ သိသူအတော်များများ လည်း သိကြပါသည်။
ဒီလို မျိုးပို့စ် မရေးချင်သော်လည်း နောက်များ ဆိုလျင် ဒီထက်ပိုပြီး ယုန်ထင်ကြောင်ထင် မခံနိုင်ပါ။ ကျွန်တော်က အွန်လိုင်းတွင် profile သာမက Facebook တွင်လည်း ရာ နှင့်ချီသော ဓါတ်ပုံများ တင်ထားသော သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျန်သောသူများ ဘာဆိုသည်ကို မသိပါ။ ကျွန်တော် အခါအားလျော်စွာ Google အစရှိသော search engine များတွင် ဖိုးသူတော်ကို မြန်မာလို အင်္ဂလိပ်လို ရှာဖွေပါသည်။ အဲ့သည်မှာ ကျွန်တော် မဟုတ်သော သူများ အထက်တွင် ဖော်ပြသော သူများကို တွေ့ရပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် အွန်လိုင်းအင်တာနက်ဆိုသည်မှာ ရေးချင်ရာလုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရသည်ဟုထင်မြင် ယူဆနေသော သူများ အားလုံး သတိပေးလိုပါသည်။ အင်တာနက်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနေသောကြောင့် ကျန်သော ကိစ္စများကို သိပ် ခေါင်းရှုပ်မခံနိုင်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ အနေဖြင့် တနပ်စား တခါလုပ်ရုံဆိုလျှင် တခြားအမည် ပြောင်းလုပ်ပါ။ ဖိုးသူတော်နာမည် မခံပါနဲ့ ။ ဒီနာမည် သုံးချင်လျှင်လည်း ဖိုးသူတော် (xxxxx) ဆိုပြီး ထပ်သုံးဖို့ တိုက်တွန်းပါသည်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေပါမည်။
ကျွန်တော်၏ ဖိုးသူတော် နာမည်နှင့် ကျွန်တော် မဟုတ်ပဲ ထုတ်ဖော်ရေးသား ပြောဆိုခြင်းများသည် ကျွန်တော် မဟုတ်ပဲ တစ်စုံတစ်ရာ ပတ်သတ်မှုရှိလာသော် ကျွန်တော် မည်ကဲ့သို့ ရှင်းရတော့မည်နည်။ ကျွန်တော်ရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ သို့သော အဲ့ဒီအတွက် အချိန်မကုန်ခံလိုပါ။ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းတွင် လူမှုရေးနှင့်ပတ်သက်သော လှုပ်ရှားမှုများစွာလည်း ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော သူများ အားလုံးသိပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော် အကြောင်းအကျိုး တစ်စုံတစ်ရာ အကယ်၍ ကျွန်တော်နှင့် တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ပါက မဖြေရှင်းချင်ပါ။ အတက်နိုင်ဆုံး တောင်းပန်ပါသည်။ နာမည်တူ ကိစ္စကို နည်းနည်းများ ဂရုစိုက်ကြပါ။ ကိုယ်က သဘောကျလို့ ပေးလိုက်ပေးမယ် သူများက ဒီနာမည်သုံးပြီး ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေသလဲ ဆိုတာ အင်တာနက်တွင်အလွယ်တကူ ရှာနိုင်ပါသည်။
အန်တီချမ်းဆိုသူလည်း ကျွန်တော်ဟာ ဖိုးသူတော် ဆိုသော ဘလော့ဂ်ဂါတစ်ဦးဟု သိမည် မထင်ပါ။ သိလျှင်လည်း ကျွန်တော်သည် သူ့အား ကွန့်မန့်လာလာရေးနေသော ဖိုးသူတော် ဟုထင်ပါမည်။ သူပေးသော ကွန့်မန့်၏ အီးမေးလ် တွင်သေချာကြည့်ပါ ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော့် မေးလ် လိပ်စာမဟုတ်ပါ။ နားလည် သဘောပေါက်စေလိုပါသည်။
ဖိုးသူတော် ကိစ္စများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိစေလိုပါသည်။ တောင်ဝှေးလဲရင် ဖိုးသူတော်ထူနိုင်သည်။ ဖိုးသူတော် လဲပါက တောင်ဝှေးမထူနိုင်ပါ။
အားလုံး မုဒိတာပွား နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ကြပါစေ။
ကျွန်တော့် အသိမိတ်ဆွေအများ သူငယ်ချင်းများခေါ်သော ဒါ့အပြင် မသိသေးသူများ ထပ်မိသိရန် ကျွန်တော် အမည်များ ရေးပေးပါမည်...
ဖိုးသူတော် ၊ သူတော်လိမ် ၊ ကီးစိန်
၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်
ရေးသားသူ phoe thu taw at 12:55 AM
Barcamp Yangon သတင်းမီဒီယာ ရှင်းလင်းပွဲ အောင်မြင်စ...